नेपाली सेनामा थप ९६ जनाले पाए जागिर, को–को भए पास ? – नेपाली संगसार
नेपाली सेनामा थप ९६ जनाले पाए जागिर, को–को भए पास ?
नेपाली संगसार calendar_today ३० चैत्र २०७७, 4:44 am
काठमाडौं । नेपाली सेनामा ९६ जनाले जागिर पाएका छन्।
नेपाली सेनाको भर्ना छनोट कार्यरथी विभागले २०७७ साल पुस २१ गतेको विज्ञापनमा बन्दोबस्ती कार्य सिपाही (खुला तथा समावेशी) पदको नजिता सार्वजनिक गरेको हो। जसमा ५० जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका छन्।
यस्तै सैनिकका सन्तति तीन जना महिला ९ जना, आदिवासी जनजाति १४, मधेशी १२ र पिछडिएको क्षेत्रका दुई जना गरि ९६ जनाले नाम निकालेका छन्।
हेर्नुहोस् को-को भए पास